Njikwa ụgbọ elu maka Prepar 3D v4?
Njikwa ụgbọ elu maka Prepar 3D v4? 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1334
Ndewo, enweela P3D v4 kemgbe ọtụtụ ọnwa ma na-achọ Douglas propliners ga-arụ ọrụ v4. Enwere m ihe c47 / DC3. Enwe enweghị chi na DC4 / 6or 7s nwere ike ịrụ ọrụ. Ọ ga-amasị m ịnweta ụfọdụ DC-6Bs ga-arụ ọrụ v4!
Njikwa ụgbọ elu maka Prepar 3D v4? 3 ọnwa 2 izu gara aga #1718
Ndewo. Used jirila Noratlas? Achọpụtara m ya dị ka mgbasa kacha mma n'efu. Ọzọkwa Douglas C47 Skytrain bụ mpempe nka, mana Noratlas bụ iwu! (Agbakwunyere m Pilot)
Oge ike page: 0.176 sekọnd